Japan, ihe atụ nke mmepe na-adigide | Njem zuru oke
Japan, mba kachasị emetọ emetọ n'ụwa
Daniel | | Japan
Japan nwere ike ịnya isi na ịbụ mba kachasị emetọ emetọ n'ụwa. N'ikwu eziokwu, ndị ọchịchị nke mba a na-elezi anya na mmetọ nke ihe ọkụkụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, karịa ọtụtụ mba ndị mepere emepe.
N’ebe a na-akpo mba nke anwu n’anwu, enwere nnukwu mmata banyere gburugburu ebe obibi. Ma akụkụ nke ụmụ amaala na gọọmentị enwere ọmarịcha nchegbu maka ichebe gburugburu ebe obibi, nke sụgharịrị n'ime usoro nke atumatu na omume na-arụ ọrụ dị ka ihe atụ maka mba ndị ọzọ n'ụwa.
Agbanyeghị, ntinye aka a na gburugburu ebe obibi na mmetọ ikuku anaghị adịkarị otu a. Na Mgbanwe Mmegharị Ọ bịarutere Japan na njedebe, na ọkara nke abụọ nke narị afọ XNUMX (Meiji Era). Otú ọ dị, mgbe usoro ahụ dị ngwa ngwa ma sie ike.
N'ime afọ ole na ole, mba ahụ jupụtara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwupụta ihe ndị na-eto ma na-emepe n'enweghị njikwa ọ bụla. Mmebi nke gburugburu ebe obibi dị egwu. E bibiri gburugburu ebe obibi ma merụọ osimiri, ọdọ mmiri na nnukwu ala.
Ọdachi nọgidere na-eme ruo mgbe ọ ruru oge dị oke egwu. Ọ bụzi mgbe ahụ ka a manyere ndị ọchịchị iwepụta usoro dị iche iche iji gbalịa ịkwụsị ọdachi ahụ.
1 60s: Nsogbu gburugburu ebe obibi Japan dị ukwuu
2 Mba opekata mpe mmetọ n'ụwa
2.1 Isi rụzuru
2.2 Na-eche isiokwu
60s: Nsogbu gburugburu ebe obibi Japan dị ukwuu
Nsi nke cadmium nsị nke aquifers, mmetọ ikuku nke nsị nke sọlfọ dioxide na nitrogen dioxide kpatara, yana oke nsị nke ndị mmadụ site na ndị ọrụ kemịkalụ na-emerụ ahụ dị na nri nri ... typedị akụkọ a ghọrọ ihe a na-emebu n'ime Japan site na 60s.
Oku Japanese "ọrụ ebube akụ na ụba" ọ bịara na nnukwu ụgwọ. Iji nwee ọganihu, mba ahụ merụrụ akụkụ osimiri ya, obodo ya na ubi ya. Ọtụtụ ụdị anụmanụ anwụọla na n'etiti ndị mmadụ ọrịa ọrịa iku ume na ụdị kansa dị iche iche arịgoro elu.
N’afọ ndị 60, Japan malitere itinye nnukwu ihe iji gbochie mmetọ.
Nsogbu mmetọ emetọ nke 60 bụ a ebe ntinye. Ndị Japan dị uchu ma nwee ezi uche mụtara ihe mmụta ha. Mkpu ụda ahụ dara ụda ma ọtụtụ mmadụ ghọtara na ọ bụ oge ime ihe. Na 1969 the Constù Ndị Ahịa Japan, nke nwetara ike dị ukwuu nke ike ọchịchị.
Site n'oge ahụ gawa, gọọmentị niile ejirila obi ike mee ihe n'agbanyeghị nchedo gburugburu ebe obibi na ahụike nke ụmụ amaala. Enwere nnukwu ntaramahụhụ ego maka ụlọ ọrụ ndị na-anaghị agbaso iwu gburugburu ebe obibi, ntaramahụhụ kwesịrị n thatomi nke nwere mmetụta achọrọ.
Mba opekata mpe mmetọ n'ụwa
Taa nkwupụta nke "Japan, mba kachasị emetọ emetọ n'ụwa" bụ nnukwu isi iyi nke mba a. Ezi ihe akaebe nke a bụ mmụba dị ịrịba ama na ogo ndụ, ọdịmma mmekọrịta mmadụ na ndụ ndụ maka ndị bi hanke nke kacha ochie na uwa.
Japan abụrụla ihe atụ ịgbaso n'usoro nke mmepe na-adigide. Agbanyeghị na ogo nke mmetọ kachasị pere mpe na ọtụtụ mba nwere mmekọrịta gburugburu ebe obibi dịgasị iche site n'afọ ruo n'afọ, Japan na-adị elu mgbe niile na European Nordic states (Norway, Sweden, Finland, Denmark).
Otu n'ime ihe ndị Japan rụzuru bụ ihe ịga nke ọma na njikwa nke mkpofu ụlọ ọrụ na kọmputa, yana ichebe ohia. N'ihe abụọ a, Japan bụ ihe atụ maka ọtụtụ mba ndị ọzọ n'ụwa.
Nnukwu ihe mmeta nke gọọmentị ndị Japan n'ihe metụtara gburugburu bụ mbelata nke mmetọ ikuku n’obodo. Ndepụta a eruola ọnụ ọgụgụ na-akpata nchekasị na 80s, mana ọ belatara nwayọ nwayọ n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya.
Japan ejirila belata oke mmetọ ikuku n'obodo ya
Otú ọ dị, mba ahụ ka nwere ụfọdụ nsogbu ndị isi iji dozie. Japan, bụ mba kachasị emetọ emetọ n'ụwa, bụkwa ebe ọdachi nuklia na-akpata Fukushima na Machị 11, 2011. Ọdachi a mere ka a mata adịghị ike nke ụdị ụdị a n'ihe gbasara nchekwa. N’ụzọ dị mwute, ihe si na ọdachi a pụta ka dịkwa.
Ọzọ 'mmerụ' na faịlụ gburugburu ebe obibi Japan bụ enweghị mmasị ịkwụsị ya Nchụ nta Whale. Na 1986 na Kọmitii Whaling International (IWC) machibidoro ịchụ nta nke nnukwu anụ ọhịa maka ebumnuche azụmahịa. N'agbanyeghị nke a, ụgbọ mmiri ndị Japan na-akụ azụ gara n'ihu na ọrụ ha na-ekwu na ha bụ nwude maka ebumnuche sayensị. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na Disemba 2018, Japan mechara kwupụta na ọ ga-ewepụ ya na CBI iji gaa n'ihu na-azụ ahịa azụmahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Japan, mba kachasị emetọ emetọ n'ụwa
Ahụkarị ngwaahịa nke Gris
Akwa ebube nke ndị hụrụ n'anya n'etiti Providencia na Santa Catalina